Vahoaka malagasy « Natao fitaovana ahazoana toerana fotsiny »
Fifidianana amin`ny ampahany Kaominina roa no tsy nahitana kandidà mpanolotsaina
Miisa 6 129 ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ho ben`ny tanàna voarain`ny CENI. Nahitana kandidà avokoa ireo kaominina miisa 1695 manerana ny nosy.
Be loatra ny ahiahy Ahiana hikorontana ny fifidianana
Hita taratra amin’izao filatsahan-kofidiana amin’ny fifidianana ben’ny tanàna izao ny tsy fahatokisana intsony ny hisian’ny lalao madio.
IEM Efa tsy maharesy lahatra intsony
Amin ny talata 24 septambra ho avy izao ny lisitra ofisialy avy amin’ny CENI. Ny tatitra ofisialy no hahafantarana ny isan`ny kandidà narotsaky ny antoko, tsy miankina, lehilahy sy vavy, ny andraikitriny avy.
Kajikajy politika Sefo fokontany 5 indray nesorina
Mandeha ny kajikajy politika amin’ny resaka fifidianana ben’ny tanàna izay hatao tsy ho ela.
Arivonimamo Hohavaozina ny seranam-piaramanidina
Hitondra ny anjara birikiny ao amin’ny kaominina Arivonimamo, ny kandida Rarija Rajo Tsiferantsoa, izay nanatitra ny taratasy filatsahan-kofidiana tao amin’ny OVEC tao Arivonimamo, ny zoma lasa teo
Tsy takatro loatra ny politikan-dry zareo, hoy ny filohan’ny antoko politika Manangana Madagasikara Vaovao (MMV), Arlette Ramaroson, raha nanontaniana ny zava-nitranga teny anivon’ny antenimieram-pirenena tao anatin’izay 3 andro izay.
Teo ny fahalanian’ny filohan’ny antenimieram-pirenena 100% ary isany koa ny fahalaniana birao maharitra 100% mpiara-dia amin’ny fitondrana na IRD. Raha araka ny lalàna, hoy izy, dia tokony hametraka ny hoe « contre pouvoir » satria ny mpanohitra dia nifidy io filoha io koa. Raha ny lojika, ny atao hoe mpanohitra dia tsy mankato ny praograman’ny fitondrana sy ny fihetsika entiny manatontosa izany. Nisy ny fihetsik’ireo depiote tsy miankina izay nivadi-pitokisana tamin’ny vahoaka sahady ary amiko tena nanao fisolokiana ireny, hoy ny tenany, satria natao fitaovana ahazoana toerana fotsiny ny vahoaka.